Chain Link nsu nwa oge
site na nhazi na 20-03-23
Fence panel size ： 1.825 * 3.658m Waya ： 2.6mm tupu pvc / 3.6mm mgbe pvc Mesh oghere ： 2,3 / 8 ”* 2,3 / 8” Frame ： ∮38 * 1.5mm Otu pcs kwụ ọtọ bracing Emechara: Galvanized & Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị RAL 6005 Fence ụkwụ ...
Ogige ọdụ ụgbọ elu
site na nhazi na 20-03-18
W * H: 2250 * 2500mm, Mesh nha: 50x100mm, Waya dia 5.0mm. Biputere: 80 * 80 * 2.0 * 3000mm Elu ahụ nwere ntụ ntụ siri ike (ezigbo aha Akzo Nobel) siri ike iji guzogide mkparịta ụka ahụ. N'elu oria V nke ogwe aka ka ogha-mma….
Ogwe nchekwa dị elu
W * H: 2300 * 2500mm, Mesh nha: 76.2 × 12.7mm, Wire dia 4.0mm. Elu ahụ nwere ntụ ntụ siri ike iji guzogide mkparịta ụka ahụ. N'elu ogwe, mmezi tinye intaneti concertina na waya diri iji mee ka ndi…
ClearVu mesikwuru panel
W * H: 3358 * 3297mm, Mesh nha: 9.5 × 76.2mm, Wire dia 4.0mm. Mpempe akwụkwọ na-eme ka ọ dị ọkụ welded 15 * 5.0mm bar flat per 150mm on panel. Ogwe a dị elu, ịdị elu dị elu, oghere mgbochi dị warara maka mkpịsị aka na ụkwụ ...